Matangwe ese echirume nemikono yese inotanga kuberekwa ndezvaJehovha (1, 2)
Mutambo Wechingwa Chisina Mbiriso (3-10)
Matangwe ese echirume nemikono yese inotanga kuberekwa zvinofanira kupiwa Mwari (11-16)
Israeri anoitwa kuti aende akananga kuGungwa Dzvuku (17-20)
Shongwe yegore neyemoto (21, 22)
13 Jehovha akataurazve naMozisi, achiti: 2 “Nditsaurire dangwe rese rechirume* pakati pevaIsraeri. Munhurume wese anotanga kuzvarwa ndewangu, uye mhuka hono yese inotanga kuberekwa ndeyangu.”+ 3 Mozisi akabva ati kuvanhu: “Yeukai zuva iri ramakabuda muIjipiti,+ muimba yeuranda, nekuti Jehovha akakubudisai muno neruoko rune simba.+ Saka hapana chinhu chine mbiriso chinofanira kudyiwa. 4 Muri kubuda pazuva iri, mumwedzi waAbhibhi.*+ 5 Kana Jehovha akusvitsai kunyika yevaKenani, vaHiti, vaAmori, vaHivhi, nevaJebhusi,+ yaakapikira madzitateguru enyu kuti achakupai,+ nyika inoyerera uchi nemukaka,+ munofanira kuita mhemberero iyi mwedzi uno. 6 Kwemazuva manomwe, munofanira kudya chingwa chisina mbiriso,+ uye pazuva rechinomwe pachava nemutambo unoitirwa Jehovha. 7 Munofanira kudya chingwa chisina mbiriso kwemazuva manomwe;+ uye hamufaniri kuva nechinhu chine mbiriso,+ kana mukanyiwa wakavira munyika* yenyu yese. 8 Uye unofanira kuudza mwanakomana wako pazuva iroro kuti, ‘Ndinoita izvi nemhaka yezvandakaitirwa naJehovha pandakabuda muIjipiti.’+ 9 Uye ichi chinofanira kuva sechiratidzo paruoko rwako uye sechiyeuchidzo* pahuma yako,*+ kuti mutemo waJehovha uve mumuromo mako, nekuti Jehovha akakubudisa muIjipiti neruoko rune simba. 10 Unofanira kuchengeta murau uyu gore negore kana nguva yawo yasvika.+ 11 “Kana Jehovha akusvitsa kunyika yevaKenani, yaakapika kwauri nekumadzitateguru ako kuti achakupa,+ 12 utsaurire Jehovha dangwe rese rechirume,* nechipfuwo chese chikono chinotanga kuberekwa pazvipfuwo zvaunenge wava nazvo. Zvese ndezvaJehovha.+ 13 Mwana wese wedhongi anotanga kuberekwa umudzikinure negwai, uye kana ukasamudzikinura, unofanira kutyora mutsipa wake. Uye udzikinure matangwe ese echirume evanakomana vako.+ 14 “Kana mwanakomana wako akazokubvunza kuti, ‘Izvi zvinorevei?’ unofanira kuti kwaari, ‘Jehovha akatibudisa muIjipiti, muimba yeuranda, neruoko rune simba.+ 15 Farao paakaomesa mwoyo achiramba kuti tiende,+ Jehovha akauraya matangwe ese munyika yeIjipiti, kubvira kudangwe remunhu kusvikira kudangwe remhuka.+ Ndokusaka ndiri kubayira Jehovha mhuka hono dzese dzinotanga kuberekwa,* uye ndichidzikinura matangwe ese evanakomana vangu.’ 16 Ichi chinofanira kuva sechiratidzo paruoko rwako uye serundanyara* pahuma yako,*+ nekuti Jehovha akatibudisa muIjipiti neruoko rune simba.” 17 Farao paakarega vanhu vachienda, Mwari haana kuvatungamirira nenzira yaipfuura nemunyika yevaFiristiya kunyange zvazvo iri iyo yaiva pedyo. Nekuti Mwari akati: “Pamwe vanhu vangachinja mwoyo kana vasangana nehondo vodzokera kuIjipiti.” 18 Saka Mwari akaita kuti vatenderere nenzira yekurenje reGungwa Dzvuku.+ Asi pavakabuda munyika yeIjipiti, vaIsraeri vakanga vakarongwa semauto. 19 Mozisi akatorawo mapfupa aJosefa, nekuti Josefa akanga aita kuti vanakomana vaIsraeri vapike zvakasimba achiti: “Mwari haazotadzi kukurangarirai, uye munofanira kuzobuda muno nemapfupa angu.”+ 20 Vakabva kuSukoti vakanodzika musasa kuEtamu kumucheto kwerenje. 21 Jehovha akanga achifamba mberi kwavo masikati ari mushongwe yegore achivatungamirira munzira,+ uye usiku ari mushongwe yemoto kuti avape chiedza, kuti vakwanise kufamba masikati neusiku.+ 22 Shongwe yegore yaisabva pamberi pevanhu masikati, uyewo shongwe yemoto yaisabva pamberi pevanhu usiku.+
^ ChiHeb., “mumiganhu.”
^ Kana kuti “sechirangaridzo.”
^ ChiHeb., “wese anovhura chibereko.”